Fahasalaman’ny zaza Nidina ny tahan’ny fampinonoan-dreny
Zaza misy manary Misy raisin-dry masera, misy raisina fikambanana
Nihanahazo vahana indray tato ho ato ny fanariana zaza teto amintsika.
Iarahana amin’ilay fiara mandehandeha antsoina hoe : Luisa, ahitana ireo karazam-pitaovana faran’izay raitra indrindra toy ny télémedicine izany hahafahana mamoaka ny sarin’ilay vozon’ny tranonjaza marary eo no ho eo ary hitadiavam-bahaolana avy hatrany amin’ireo dokotera manampahaizana any ivelany. Omaly fotsiny dia efa nahatratra 250 ireo vehivavy tonga nisoratra anarana teo anivon’ity fokontany iray ity. Natomboka tamin’ny fandraisana ny anaran’izy ireo izany. Nitohy tamin’ny fitsapana ny nono mba hahafantarana ilay aretina homamiadana, niampita tamin’ny fitarafana mihitsy ho an’ireo ahiahiana nipaka hatrany amin’ny fanaovana fitiliana ny vozon’ny tranonjaza. Hitohy ao amin’ny fokontany Manakambahiny moa ny hetsika rahampitso alarobia.